मनिषा कोईरालाको उतारचढावले भरिएको जीवन: २० प्रेम सम्बन्ध, एक डिभोर्स !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
मनिषा कोईरालाको उतारचढावले भरिएको जीवन: २० प्रेम सम्बन्ध, एक डिभोर्स !
काठमाडौँ– भारतीय चलचित्रमा पाईला टेक्ना साथ पहिलो फिल्मबाटै इलु इलु गर्लको नामबाट मनिषा कोईराला बलिउडमा चर्चित भइन् । नेपाली काँग्रेसको राजनीतिको मुहान कोइराला खानदानकी सुन्दरी छोरी मनिषाले बर्षौ आफ्नो क्रेज बरकरार राखीन् पनि। सन् १९९० को दशकमा उनको पपुलारिटी अत्यधिक रहेको थियो।
मनिषा काजोल, माधुरी र करिश्मा जस्तै बलिउडकी चर्चित अभिनेत्रीकै तुलना चर्चित रहेकी थिईन । मनिषाका उक्त समयमा धेरै याद गर्न लायक फिल्महरुमा प्रसंशनीय भूमिका निभाएकी छन् । उनीको अभिनय र सुन्दरताको कारण जति चर्चामा रहिन् त्यतिनै विवादका कारण पनि चर्चामा रहिन् । बताइन्छ की मनिषा आफ्नो फिल्ममा भन्दा बढी व्यक्तिगत सम्बन्धमा ध्यान दिने गर्थिन। उनका केही अफेयर्स रहे । यसको असर उनको फिल्मी करिअरमा समेत पर्यो । ज्याकी श्राफ, सलमान खान, नाना पाटेकर, विवेक मशुरान, आर्य वैद्य लगायतसँग उनेको सम्बन्ध थियो । सलमान र मनिषा फिल्म ‘सङ्गदिल सनम’ र ‘खामोशी’ को सुटिङको समयमा नजिकिएका थिए । ‘खामोशी’ को सेटमा सलमान र मनिषाको प्रेम बसेको बताइन्छ ।
कृस्पिन कनराय नेपालमा अस्ट्रिलियाका राजदुत थिए । मनिषा र कृस्पिनको अफेयर केही बर्ष चल्यो । २००३ मा मनिषा फिल्म मेकिङ कोर्स लिन लण्डन गइन । उहाँ उनले अर्का एकसँग प्रेम गरिन् । नाइजेरियन बिजनेस म्यान सेसिन एन्थनीसँग उनको प्रेम बस्यो । त्यही समय मोष्न आर्यन बैद्यसँग पनि उनी नजिक थिइन । आर्यनका लागि उनले केही बी ग्रेड र सी ग्रेडका फिल्ममा समेत काम गरिन् । आर्यन बैद्य जब आफ्नो प्रचार प्रसारका लागि मनिषाको प्रयोग गर्न थाले तब उनीहरुको सम्बन्ध तोडियो । मनिषाको लामो लभ लिस्टमा क्रिस्टोफर डारिसको नाम समेत जोडियो । २००९ मा यो जोडि विवाह गर्ने तयारीमा थिए । त्यहीबेला उनीहरुको बीचमा खटपट आएको थियो ।
सम्राट मनिषा भन्दा ७ बर्ष कान्छा थिए । केही समयसम्म उनीहरुको सम्बन्ध राम्रो थियो । तर उनीहरुको सम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्न सकेन र सम्बन्ध विच्छिेद भयो । त्यसपछि मनिषालाई क्यान्सर लाग्यो । अमेरिकामा उपचार गराएर उनले क्यासर जस्तो डरलाग्दो रोगलाई समेत जित्न सफल भईन् ।
सुन्दर सा’वका फोहोरी वडा कार्यालय !